Tenga Trenavar powder (4642-95-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / vamwe / Trenavar powder (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hweTrnavar powder (4642-95-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Trenavar powder inowanzozivikanwa seEstra-4,9,11-triene-3,17-dione, pamwe neTrendione uye iri 10 nguva dzimwe uyerogenic kupfuura Testosterone. Trenavar is prohormone inotarisa ku17b-HSD1 kuti iite Trenbolone inoshanda, zvinoreva kamwechete mumuviri wako Trenavar inoshandura kuTrenbolone kana Tren.
Color: Muchena kana kuti mutsvuku Mucheka wechipfu
Kemikari Mazita: Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Mamwe mazita: Trendione, Trenabol, Tren Elite, T-Var 15 uye Super Trenabol.RU-2065, Trenava rpowder, Trendione powder
Trenavar powder inozivikanwa sechimiro cheEstra-4,9,11-triene-3,17-dione, pamwe neTrendione uye inonzi 10 dzimwe nguva uyerogenic kupfuura Testosterone. Trenavar poda yakasikwa ipirmone inotarisa 17b-HSD1 kuti iite Trenbolone inoshanda, zvinoreva kamwechete mumuviri wako Trenavar poda yakashandurwa kuTrenbolone aka Tren. Trenavar vashandisi vehushoni vanowana huwandu hwemasimba anowedzera pamwe nekuwanda. Vashandi vanowedzera kukurumidza kurasikirwa kwemafuta uye vakawedzera vascularity yemasumbu. The Trenavar powder compound yakave yakakurumbira uye inodiwa nekuda kwemigumisiro yayo ine simba mune zvishoma. Icho ndicho chakanakisisa chezvinhu zvose pasi pano paunofunga nezvehuwandu hunogona kuwanda kwehuwandu hwakawana uye mafuta akarasika.
Trenavar poda yakasviba, inozivikanwawo seTrendione, inonzi prohormone yemuromo inopesana neyakanyatsozivikanwa injectable steroid trenbolone chete ne ketone panzvimbo ye 17th. Nokudaro, inobereka trenbolone inoshanda mumuviri, ichiita kuti ive yakasimba zvikuru uye yakasimba. Sezvo zvakangofanana zvakagadzirirwa kutsvaga trenbolone, kunze kwechifukidziro (iyo inowanzova mugumisiro wekusavhiringidza kuvhara mukati mutsva), mushumiri anofanira kuwana zvakafanana zvakafanana nekushandisa injectable trenbolone.
Iyi prohormone inokurumidza-kushanda iyo vashandi vakapindira kuti vakakwanisa kuona mitsva mushure mekunge 7 kune mazuva 10 mushure mekutanga kwavo kweTrnavar powder. Zvisinei, iyo bedzi yakaderera ndiyo Trenavar yakasvibiswa yakawanda inogona kuderedza kutsungirira kwako kwose, izvo zvinogona kuita kuti zvive nyore kuti iwe ugare kwenguva refu sezvaunogona apo iwe uri kutora maitiro emotokari.
Iye zvino nepo Trenavar powder inoonekwa seprohormone yakasiyana-siyana, iyo inoshandisa zvinhu zvakawanda zvakafanana neTrenbolone, steroid injectable iyo inewo vazhinji vateveri munyika inovaka muviri. Izvo zvinoparadzanisa zviviri kubva kune mumwe nemumwe ndeyekuti iyo yekare ndiyo ketone chete panzvimbo ye 17th kure neyekupedzisira mumakemikari avo.
Chii chinonzi Dhenavar powder
Vazhinji vashandisi vanotenderera 30 kusvika ku45mg yeTrnavar powder zuva nezuva kwemazuva 30 nepamutambo wekubatsira. Zvakanakisisa kuparadzanisa iyi dhigiri pamusoro pe 2 kusvika 3 servings ya 15mg pazuva.
Pakutanga, trendione inofanira kuiswa pa 50-70 milligrams (mg) zuva nezuva kupatsanurwa kwemaji painenge iri yoga, uye kana zvikanganiso zvisingaitiki, muyero unogona kuwedzerwa kusvika ku 100mg. Hapana chikonzero chekudarika chiyero ichocho, uye hachifaniri kuendeswa kwenguva yakareba kupfuura masikati 5 kana 6.
Kana yakashandiswa sechikamu chechikwata, zvinokurudzirwa kuti ushandise trendione kuisa purogiramu, uye dhidiki shoma re 20-50mg pazuva kupatsanurwa isiri yakakwana. Vashandisi vakawanda vanosarudza kuvhara equipoise, testosterone, kana primobolan nayo. Zvimwe, vamwe vashandisi kunyange vanosarudza kuvhara trendione ne deca durabolin, asi ramba uchifunga kuti kuvhara progestin mbiri kunofanira kuitwa chete nevashandi vane ruzivo.
Paunoshandisa trendione kokutanga, inofanira kumhanyira solo pamusana purojekiti kuti uone maitiro ako.
Sei Trenavar powder inoshanda
Trenavar poda yakashata inoshandiswa nekutsvaga 17b-HSD1 uye iyo inokonzera hydrogenates iyo kemukari kune kutendeuka mukati memuviri wenyu kune trenbolone. Trenbolone neTrnavar powder zvakafanana, chaizvoizvo vanogovana zvakafanana 3 conjugated double bonds. Trenavar pikisi yakasvibirika yakasiyana mune zvekuti ine 17 ketone. Somugumisiro vashandisi vanotora kuti vawane zvinenge zvakafanana zvavanokwanisa kuburikidza nekushandira chitoro chebhitone.
Vashandi vanowedzera kuwedzera nokukurumidza mumasimba avo uye simba mukati mechikwata, uye kuwana zvichitanga kuitika mukati memazuva 7-10 mushure mekutanga kwemuti. Mushure memasvondo e4-6, vazhinji vashandisi vanoita simba rekudzidzisa vachataura kuti vari pedyo, kana kupfuura, zvinyorwa zvavo pachavo pavanosimudza. Uyezve, vanotaurawo misumbu iri kuwedzera, mapurumu makuru panguva yekudzidziswa, uye kuwedzera kuvhudzi.
Nezvekutsungirira kwedzidziso yekudzidzisa, trendione chisarudzo chisina kunaka, sezvo chichakuvadza kutsungirira kwako zvinangwa.
Kunze kwekubatsira kwakadaro, vashandi vemuviri vanoendawo kune Trenavar powder kuitira zviri nyore maererano neshoko. Uya kuzofunga nezvazvo. Sei uchienda kuburikidza nekutambudzwa kwekujova kana iwe uchigona kutora zvinhu zvakafanana nemuromo? Inogonawo kushandiswa sechimiro cheprohormone kana chikamu chechikwata.
Iyi prohormone ndiyo imwe chete inopupurirwa iyo inoshandurwa kuva Trenbolone kana inoshandiswa nemuviri. Iye zvino paine huwandu hweTrnavar yakasviba "maonesera" ayo aunogona kuenda, izvi chaizvoizvo zvinoshandura ku dienolone, izvo zvisingakwanisi kuenzanisa.
Trenavar powder yakanyatsonaka uye inowanzoshandiswa nevadzidzisi vemumuviri panguva yepikisano prep uyewo kunze kwegore. Vashandi vakawanda vane ruzivo rwehupfumi uyu anotaura kuti chikwata ichi chinokwanisa kusangochengetedza, asiwo pakutakura pahuwandu huwandu panguva iyi kana uine huwandu hwekudya koriori.
Uyezve, Trenavar poda yakashata haishanduki mu estrogen uye haichazoiti chero zvayo yemaitiro erosiki apo mabhasikoro. Zvisinei, zvichiri kukosha kuti iwe uwane mishonga yakakosha yepoteri kana PCT iri kuenda shure kwebhazikoro neprohormone iyi kuti ibvise chero migumisiro yakaipa yemigumisiro.
Iye zvino nepo Trenavar yakasviba isina kuchinja kune estergen uye haizotori mitezo yesrogenic, zvakakosha kuti iwe uwane mishonga yakakodzera yepashure kana PCT iri kuenda mushure mebhasikoro neprohormone iyi. Sezvo Trenavar powder ine simba rakanyanya, iwe uchada PCT kubatsira nhengo dzako kudzikazve shure kwekugadzirisa iyi prohormone uye kukurudzira kuitika kwemahomoni ako.
Trenavar mbiriso yakashambadzira Marketing
Kuti igoverwe mune ramangwana rakatevera.RU-2065
Ko Trenavar powder Ane Matambudziko Api
Saizvozvowo chero purogiramu yeprohormone, vashandisi vanoona kuwedzerwa kweropa uye cholesterol yakakwirira kana mabhasikoro Trenavar powder. Muzviitiko zvakawanda, kukwirira kwepamusoro kweropa kunopera mushure mokunge mhirizhonga yapera uye zvinokonzerwa nechiropa zvinogona kukanganiswa zvakanaka pamusangano wekusimudzira uye Post Cycle Therapy. Trenavar powder inogonawo kuwedzera uchisimba uye inoderedza libido kwechinguva. Mashoko akanaka ndeokuti Trenavar poda yakasanganiswa haina aromatize zvinoreva kuti hazvizoshanduki ku Estrogen. Saka haufaniri kunetseka nezvekusimba Gyno Aka Man Boobs.
Trenavar powder inowanzopedza utachiona hwehutano hwako hunokonzera kugadzirwa kweprolactin. Kuwedzeredza kwePlactin kubudisa kunogona kutungamirira mukuva nehanya, hukuzvikudza, uye chikafu mumharayi. Kuti udzivirire rudzi urwu rwemigumisiro, shandisa Prolactin inhibiter panguva yako yekutenderera yakadai seInhibit-P neSNS kana Prolactrone neBlack Lion Research.
Vaya vanoziva "Tren Cough" havafaniri kunetseka pamusoro pazvo apo bhasikoro Trenavar yakasvibirira yakasviba sezvo iyo inongova nhengo yechirwere yejecha. Izvi hazvisati zviri kunetseka seTrnavar michina yehupfu yakatorwa inotorwa nemuromo.
Trenavar powder isiriwo prohymone isiri-methylated iyo inoreva kuti haina kufanana nemuviri, zvisinei izvi hazvirevi kuti haufaniri kutora purogiramu yekusimbisa. Rutsigiro rutsigiro runodikanwa nechinangwa cheprohormone.
Kune rumwe rutivi, zvinotevera migumisiro inoshushwa nevashandisi vakatotya mabhasika neTrnavar raw powder:
Inogona kukonzera misoro uye kusuruvara mumakumbo
Inoderedza utachiona hwehutano
Inogona kukonzera kuvhara mumashuga eropa
Inogona kusimudza prolactin
Inoderedza kutsungirira mazinga
Zvinogona kukonzera chirwere muhuipi chekutsterol uye kuwedzerwa kweropa
Inogona kuisa dambudziko kumwoyo uye chiropa
Inogona kukonzera kusuruvara, kuneta uye kutadza
Kunyange zvazvo kune dzimwe nhoroondo dzinosimbisa Trenavar powder dzinogona kukonzera "Tren kukwezva," ichi hachisi chimwe chinhu chaunogona kupfuura kana uchishandisa prohormone iyi. Iwe unogona kungoona zvakafanana kana uchishandisa iyo injectable Trenbolone
Nzira yekutenga Trenavar powder kubva kuAASraw
Trenavar mbiriso yakakosha Recipes
Kumubvunzurudza Mutengi wedu Mumiririri (CSR) nezvemashoko, nekuda kwako